खण्डग्रास सूर्यग्रहण: काठमाडौँमा बिहान ८ बजेर ४३ मिनेटमा, नेपालमा ३९ प्रतिशत देखिने, कुन राशीले हेर्न मिल्छ ? – Halkhabar kura
९ पुष २०७६, बुधबार १०:१२
खण्डग्रास सूर्यग्रहण: काठमाडौँमा बिहान ८ बजेर ४३ मिनेटमा, नेपालमा ३९ प्रतिशत देखिने, कुन राशीले हेर्न मिल्छ ?
काठमाडौँ । पुस १० गते बिहान ८ बजेर ४३ मिनेटदेखि खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएको छ । काठमाडौँमा बिहान ८ बजेर ४३ मिनेट, महेन्द्रनगरमा ८ बजेर ३८ मिनेट र भद्रपुर झापामा बिहान ८ बजेर ४८ मिनेटबाट सूर्यग्रहण लागेको देखिने छ ।
वलयाकार सूर्यग्रहण काठमाडौँबाट दृष्टिगत हुने छैन तर खण्डग्रास सूर्यग्रहणको रूपमा अवलोकन गर्न सकिन्छ । सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा आउँदा चन्द्रमाले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई छेक्दा यसको छायाँ पृथ्वीमा पर्न गई सूर्यग्रहण हुन जान्छ । सूर्यग्रहण केवल चन्द्रमाको ‘न्यून मुन’ फेजमा मात्र लाग्न सम्भव हुन्छ । खण्डग्रास, खग्रास तथा वलयाकार सूर्य ग्रहण विभिन्न खगोलीय अवस्थामा निर्भर गर्छ ।
यस पटकको सूर्यग्रहणमा चन्द्रमा पृथ्वीबाट सबभन्दा टाढा पुगेको केही दिनपछि मात्र चन्द्रमाले सूर्यलाई छेक्ने हुँदा पृथ्वीबाट अवलोकन गर्दा यसले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई पूर्ण रूपमा नछेक्ने हुँदा सूर्य केवल रिङ आकारको गोलाकार रूपमा अवलोकन हुने छ । काठमाडौँबाट भने यसलाई केवल खण्डग्रासका रूपमा अवलोकन गर्न सकिने जानकारी डा. शर्माले भने ।
ज्योतिषी दीपक सुवेदीका अनुसार सूर्यग्रहणको तीन दिन अघिदेखि तीन दिन पछिसम्म सुतक लाग्छ । कुनै राशिले पनि सूर्यग्रहण नाङ्गो आँखाले हेर्न नहुने र मेष, वृक्ष तथा मिथुन राशिलाई हानिकारक छ । त्यसपछि सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मक्करलाई पनि नराम्रो छ । नक्षत्रका आधारमा कर्कट, तुला र मीन राशिलाई भने हानिकारक छैन ।
Previous चिसो मौसममा तरुल खानुका फाइदा यस्ता छन्
Next क्रिसमसको अवसरमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दिए छुट्टाछुट्टै शुभकामना सन्देश शुभकामना सन्देश